Zoo e Kazan - indawo ekahle izivakashi kanye bendawo ukuchitha isikhathi sabo mahhala, ukuphazamisa ezinkathazweni yasekhaya befuna kwansuku zonke. Lapha isimo ekhethekile kunikela ukuphumula impumuzo ukucindezeleka.
Zoo e Kazan, kanye umsebenzi tebuciko - sizindla izilwane ezimangalisayo emhlabeni, ukwenza izinkinga zemfundo, ukuqhuba imisebenzi zemfundo. Letakhiwo, okudalwe ukongiwa ka zezinyoni ezingavamile futhi ezisengcupheni, ukuboniswa yabo nocwaningo manje ukwenza njenge izikhungo zemfundo nokuqeqesha.
okunye kodwa zoo, kuphi emhlabeni wanamuhla ezimbonini emhlabeni wonke kwezimboni umuntu angaba seduze abakhileyo iplanethi futhi ufunde mayelana imikhuba, izimo zokuphila, ikakhulukazi abazalwane bethu? Kokudlala zoo (Kazan, Russia) - yindawo lapho ungajoyina Ukunakekela izilwane zasekhaya, uzizwa ngeminako ubungqabavu nethemba zokuxhumana abakhileyo neze edikibele. Lapha kulapho umuntu uthola ngokuvumelana nemvelo acwebile, abantu bayazithanda ukuphelela yayo futhi iqaphela ukuthi kubaluleke kangakanani ukuwulondoloza ukuze kuzuze izizukulwane ezaziyolandela.
Belingana landscape okumangazayo epaki kanye nokungcebeleka endaweni eziqiwini ezindaweni elinganiselwe nge eseduze izimo zemvelo zokuphila iqukethe abameleli nezilwane emhlabeni.
Abasebenzi kwezikhungo ukutadisha izici begazi futhi izici ngokwengqondo nezilwane abazifuyile. Bayakuba sithathe izinyathelo ezidingekile ukuze alondoloze zinhlobo futhi ukwanda kwabo ukwakhisa eminye zemvelo eziphilayo imvelo. Isiza ukubuyiselwa abameleli ezisengcupheni izilwane endle.
A umphumela ongemuhle ukuthuthukiswa impucuko kuphula umthetho we zemvelo kanye ukunyamalala lonke uHlu Jikelele Lwamakheli, okwakukhona bakwazi ukumelana zoo kuphela (e Kazan, ikakhulukazi), okuyinto ukulondolozwa izilwane ezingavamile.
Imibhalo emidala kunayo yonke e-Russia: umlando ekudalweni
Kazan Zoological Botanical Garden - omunye izikhungo lokuqala Russian yomphakathi, liphakathi endala ezinhlanu e-Europe.
izinsuku zayo umlando emuva 1806, wazalelwa City University ngokusebenzisa uhlelo noKarla Fuksa. Ngo-1829, i-ukuthengwa ezindaweni ezisogwini eduze olunothile Lake Kaban yayisekelwe engadini Botanical of 6.7 amahektha. Ukwakhiwa somculo laqedwa ngo-1834, futhi park emvelo wavulwa emphakathini. A usayizi encane zoo waqala ngemva kwekhulu leminyaka. Yezefundo waziwa ngokuthi Zoological futhi Botanic Garden.
Kusukela ngo-March 1997, waba yilungu lesikhathi esigcwele Eurasia Regional Association of Ama-Zoo Aquariums. On endaweni yayo ngo-2009, izingane engenakuqhathaniswa sika anama zoo wavulwa (Kazan) - "lolwandle Lwalugobile". Edolobhaneni lwasemaphusheni, wenza futhi ukuklanywa elikhanyayo, izingane zingakwazi ukuxhumana izilwane futhi bachitha isikhathi ongenakulibaleka ebaleni lokudlala.
Ngasekuqaleni kuka-2014 eqoqweni lesikhungo kwaba ezingaphezu kuka-160 zezilwane, ku arsenal of zezitshalo ezingaphezu kuka-1000 zezitshalo.
Yezefundo emisebenzini yayo nabo zoo 50 no-30 izingadi zezimila kanye phesheya.
Abasebenzi Professional ukuqhuba ezihlukahlukene izinkambo kanye izinkulumo thematic, izilwane umbukiso, ngisho ngaphandle zoo. Ethile izinkomba yokuzalanisa zezinyoni ezingavamile zezilwane nezitshalo. Sikhanyisiwe futhi iqaliswe esingenayo analogue ku izindlela zezwe umkhuba okuzivumelanisa ozalwa basekuthunjweni amabhere ansundu endle. It uqhuba ucwaningo ukufuya namabhere. Futhi, abasebenzi ezizibandakanyile ezinhlelweni ku ukhozi ezisengcupheni elimhlophe-tailed, ukhozi eyayinayo Steller Ukhozi kanye black nenqe. 1991 kwaphawulwa isenzakalo esibalulekile ukuthi wathola kusukela udoti ukhozi yasebukhosini, lo wesibili olotshwe emhlabeni.
Amazing endaweni - zoo e Kazan, isithombe zibukeke ukuqinisekisa ubunjalo bayo. On nsimu enkulu yayo holidaymaker ungakwazi ukujabulela ubuhle engadini Botanical futhi zokugcina, vakashela terrarium, aviary ehlobo, echibini nezinyoni zamanzi. ngenhla kokudlala zoo "Lukomorye" zafanelwa i yokuchitha isizungu okuthakazelisayo kwezingane.
Ezindaweni wahlomisa ngokukhethekile kuhlale izinkawu, izingwe, amabhele, ama-kangaroo. Idale izimo carnivores ukuhlala omkhaya ikati, has lvyatnik. It kuyabamangaza izivakashi engenakuqhathaniswa e Tatarstan begemotnik. Kusukela umbuso izinyoni ezu presents Izinyoni ezidla inyama, zopholi, lamaphigaga, pheasants nezinye zezinhlobo engengaphansi ezithakazelisayo. Terrarium uvikelekile izibankwa, izicabucabu, izingwenya.
Ngo abamba ukushisa, izivakashi ziyojabula izihlahla anamandla yatshalwa ekhulwini le-19 (engu-amakhophi amabili trahikarpus kudlulwe iminyaka 170).
EKazan Museum izivakashi izilwane zasendle kungaba ukondla Umkhomo, amadada ahlanzekile agcwele izinhlanzi namahansi. Inkanyezi zoo - Imvubu, "omncane" intombazane, nesisindo esingaphezu kwamathani mayelana 4. izilwane ayabulala: amakamela, amaponi, llama, idube - uthanda ukukudla kancane utshani fresh bukhule eseduze.
Zoo Pride - izilwane ukuboniswa phezu uwuphawu Tatarstan, iqhwa izingwe (okubhekiselwa kuzo nangokuthi irises).
Ngenkathi efudumele a kokudlala zoo izingane. I eliqoshiwe angadle ngabuhle obutheni farmstead umoya awukwazi kuphela ubukele izilwane, kodwa futhi unhlangothi, okuphakelayo, play.
Ngoba bonke abafuna uthinte!
Ayikho ezingadumile kakhulu futhi abathandwa abantu bakuleli dolobha kokudlala zoo (Kazan), "wahlala nogogo." Lapha izivakashi bayojabulela uhambo olujabulisayo futhi ulwazi phakathi kwezilwane. Ekuhambeleni kwakhe kuyoletha eziningi eziye zatholwa emangalisayo, ukuhlangana nabantu abasha kanye nabo. Ukuvakashela "Uhlale nogogo" - yithuba elihle uthinte ukuhlukahluka emhlabeni yasendle.
Lapha bathola isiphephelo zasendle kanye nezilwane zasekhaya. Iqoqo zoo - kangaroo, izimvu, izingulube, onogwaja nezimbuzi. Phakathi izakhamuzi enezimpiko babe izinhlobo ezahlukene izinkukhu, pheasants futhi funny kids, izinkukhu.
Abaqondisi Professional bayokujabulela ukukutshela amanye amaqiniso athakazelisayo kusukela ukuphila kwezilwane, uzobe bajwayelane nezici begazi kwezinhlobo ngabanye. Phakathi hambo njalo isivakashi ingathinta futhi pamper siphathe izilwane ezifuywayo. Ukuxhumana nabafowethu ezincane uyakujabulela izingane nje kuphela kodwa futhi abadala.
"Ukuthinta" Zoo (Kazan) - indawo ozithandayo lokuzijabulisa izingane nabazali bazo. Ukuvakasha kwakhe kuyoletha injabulo aba nalo lapho ethola zendalo omangalisayo futhi kahle ukwakheka. "Ukuthinta" zoo - ukukhulumisana ne baleen, zinezimpondo, nezinselo ezivulekile, esigqoke futhi Tailed. ehlukile yayo wukuthi zonke ezifuywayo ingathinta, thatha izandla zakho kanye feed.
abasebenzi Uhlobo futhi wobungane zoo kuzovula izivakashi zonke izimfihlakalo nezilwane abazifuyile ukuba simazi onalezizimpawu begazi kwezinhlobo, uzokutshela mayelana olwenzeka endaweni yemvelo kwezilwane. Kuyinto ephilayo ukhululekile njengezilwane, ijwayelekile abaseRussia, nezilwane ezinhlobonhlobo.
Akukho mingcele nobudala nemikhawulo lapho evakashele. Ukuvakashela izilwane zasendle esiqhingini yakhelwe engqondweni ukwazi nokukhathalela yonke into eziyibonayo, kuyoba mnandi ukuba abadala, intsha nezingane.
Zoo e Kazan silindele izivakashi ukuvakashela!